लकडाउन भनेको के हो ? Nepalpatra लकडाउन भनेको के हो ?
लकडाउन भनेको के हो ? नोबेल कोरोना भाइरस (कोविड-१९) सङ्क्रमणको सङ्ख्या लगातार बढेपछि तत्काल लागु हुने गरी आवतजावत एवम् जमघटमा कडिकडाउ गर्न ‘लकडाउन’ को घोषणा गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा लकडाउन इङ्लिस शब्दको परिभाषा नजान्ने धेरै छन् । खास भन्ने हो भने यसको वास्तविक अर्थ हो बाहिर हिडडुल नगर्नु । नोबेल कोरोना भाइरस बाहिर आएको भए बाहिर निस्कनेसंग उसले अवश्य परिचय माग्नेछ ।
यदि हामीले उसलाई परिचय दिन थालेमा उ पछि-पछि आउने र एकले अर्कालाई सक्रमित पार्ने काममा लाग्नेछौं । यस्तो नहोस् भन्नाका लागि आवतजावत एवम् जमघटमा रोक लगाइने प्रक्रियालाई लकडाउन भनेको मात्र हो ।
लकडाउन प्रक्रिया लागु भएमा रोग सर्ने सम्भावना कम हुने भएकाले यो लागु गरेको देखिन्छ । आफ्नो स्वास्थ्यसंग सरोकार हुने विषयमा चनाखो भएर लकडाउन सिस्टम लागु गर्न सके रोग सर्नबाट रोक्न सक्नेछ । नेपालीमा अनुशासन कमजोर हुदैछ ।
रोग लागेर समस्या झेल्नु भन्दा रोग नै नलागोस् भन्नेतर्फ लाग्नु महत्वपूर्ण छ । सफाईसंग रहने हात साबुन पानीले धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने, यतिखेर यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागेका छन् ।
सुरुमा रुघाखोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने लक्षण देखाउने यस्ता भाइरसको आक्रमणसँगै समयमा उपचार भएन भने ज्यानै जान सक्ने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म नोवेल कोरोना भाइरस निस्तेज पार्ने ‘भ्याक्सिन’ संसारभर उपलब्ध छैन ।
सरकारले लागु गरेको लकडाउनको पालना गरौं रोग लाग्नबाट बचौं र अरूलाई पनि बचाउन लागौं यसैमा सबैको कल्याण हुनेछ । विकसित मुलुकले समेत उपचार खोज्न नसकेका ‘२०१९ नोवेल कोरोना भाइरस’ नेपालजस्तो अल्प विकसित मुलुकमा देखा परेमा हालत कस्तो होला भन्ने खतरा बढ्दै गएको ले लकडाउन अपनाएर बचाउन लागौं ।
१ लाख ऋणबाट शुरु गरेका शङ्कर भण्डारी बने ११ होटलको…